Emerging Artists of 90s ( EAo 90s ) | Studio Square
Emerging Artists of 90s ( EAo 90s )
During the days of 1990 beyond 88 Peoples’ revolution in Myanmar, thenew social environment was born in the respective sectors such as
social, economic, political, cultural and esthetic fields. The member artists of the Emerging Artists of 90s (EAo 90s) Group who started
out, are the historical joints of the new cultural environment born in1990s.
The member artists of the Emerging Artists of 90s (EAo 90s) are those whom represent as symbols ofaperiod along the history of fine arts
together with the pioneers of Myanmar’s modern arts and the latergenerations. The member artists originated on the changing global fine arts
movements, created with the reflection of the intrinsic mind-set upon the ages they passed and participated in the arts galleries, the group exhibitions, the solo exhibitions.
The modern arts were created and exhibited narrowly during these days under the high restrictions and fierce limitations. We experienced the
ban of the whole exhibition, the ban of the exhibition of some arts works and the ban of the performance arts asapolitical stimulation
of an opposition political organization. As some dates of the modern movement of Myanmar artistic paintings, the member artists of EAo 90s group organized Snow Set, Oxygen (O2), Four Wheels and exhibited the contemporary arts such as the modern painting, the installation arts and the performance arts throughout the days of post 1990 and till nowaday they are the famous artists in different fields.
After Burma Socialist Programme party Era, 1990 Election and SLORCGovernment Era, the SPDC Government and post-2010 election Era and the
post-SPDC Government Era being intersected, Kaung Su, Nyein Chan Su, Min Zaw, Hein Thit, Bagi Lin Wunna, Nay Aung Shu and Kyaw San Thwin
founded EAos 90s group which aims to perform the Collaborative Arts Events and the remarkable shows in the names of Modern, Very Modern,
Post-Modern to New & Contemporary Arts but not asaCommercial organization and to exhibit and creat with might and main the new
vision, new idea, new fine arts materials in such period with the escalating global and political engagements and with the improving
relation with the international focus in post-2012 by-election.
၁၉၉၀ နှစ်ကာလများသည် မြန်မာနိုင်ငံတွင် ၈၈ ပြည်သူ့အရေးတော်ပုံကြီးအပြီး အစိုးရ အပြောင်းအလဲနှင့် လူမှုရေး၊ စီးပွားရေး၊ နိုင်ငံရေးနှင့် ယဉ်ကျေးမှုအနုပညာစသည့် နယ်ပယ်က@အသီးသီးတို့မှ လူမှုပတ်ဝန်းကျင် အသစ်တစ်ခု ပေါက်ဖွားလာပါသည်။ Emerging Artists of 90s " (EAo 90s) အုပ်စုဝင် Artist များသည် ၁၉၈၀ ကျော်ကာလအတွင်းမှာ အစပျိုးခဲ့ကြပြီး ၉၀ နှစ်လွန်ကာလများတွင် ပေါ်ထွက်လာခဲ့သော ယဉ်ကျေးမှုဆိုင်ရာ ၀န်းကျင်အသစ်၏ သမိုင်းကွင်းဆက်ပင်ဖြစ်သည်။
မြန်မာနိုင်ငံ၏အနုပညာသမိုင်းကြောင်းတစ်လျှောက် မြန်မာ့မော်ဒန်ပန်းချီ၏ အစပျိုးခဲ့ကြသူများ ဆက်လက်သယ်ဆောင်သူ မျိုးဆက်များနှင့် အထိအတွေ့၊ ပတ်ဝန်းကျင်၊ အကြားအမြင်များနှင့်တကွ EAo 90s အုပ်စုဝင် Artist များသည် ကာလတစ်ခု၏ အမှတ်သင်္ကေတများအဖြစ် ကိုယ်စားပြုသူများလည်း ဖြစ်နေပြန်ပါသည်။
EAo 90s အုပ်စုဝင်Artist များသည် ၁၉၈၀ နှစ်လွန်အချိန်များတွင် ပြည်တွင်းအနုပညာအတွေ့အကြုံများ ကမ္ဘာ၏ပြောင်းလဲလာသော အနုပညာအရွေ့များအပေါ်တွင် အခြေခံ၍ ထိုကာလအတွင်းပေါ်ပေါက်ခဲ့သော Artist များ၏လက္ခဏာရပ်များအတိုင်း အနုပညာရှင်တစ်ဦးစီ၏ ကိုယ်ပိုင်အမြင်၊ မတူညီသောရေးဟန်၊ ကွဲပြားခြားနားသောအသုံးပြုပစ္စည်းတို့ အပြင် ဖြတ်သန်းခဲ့သောခေတ်အပေါ် အတွင်းစိတ်၏တုံ့ပြန်မှုများဖြင့် ဖန်တီးခဲ့ကြပြီး တစ်ဦးချင်းစီအလိုက်ပြပွဲများ၊ အုပ်စုလိုက်ပြပွဲများ၊ ပန်းချီအနုပညာပြခန်းများတွင် ပါဝင်ပြသခဲ့ကြပါသည်။
ထိုကာလအတွင်း အနုပညာရပ်များအပေါ် ပြင်းထန်သောကန့်သတ်ချုပ်ချယ်မှုများဖြင့် အဓိပ္ပါယ်ဖွင့်ဆိုမှု၊ တားမြစ်ပိတ်ပင်မှုများအကြား ကျပ်တည်းကျဉ်းမြောင်းစွာ ခေတ်သစ်အနုပညာများကို ဖန်တီးပြသခဲ့ကြရပါသည်။ ပြပွဲတစ်ခုလုံးကို ပိတ်ပင်ခြင်း၊ အနုပညာလက်ရာပစ္စည်းများကို ဖြတ်ပယ်၍ ပြသခွင့်ပိတ်ပင်ခြင်းများအပြင်၊ performance art အနုပညာအမျိုးအစားများကို အခြားဆန့်ကျင်ဖက်အဖွဲ့အစည်းတစ်ရပ်၏ နိုင်ငံရေးလှုံဆော်မှုများအမြင်ဖြင့် သုံးသပ်ပိတ်ပင်အရေးယူမှုမျိုးပေါင်းများစွာကိုလည်း တွေ့ကြုံခဲ့ကြရပါသည်။
မြန်မာပန်းချီလောက၏ မော်ဒန်လှုပ်ရှားမှုနေ့စွဲအချို့အဖြင့် EAo 90s အုပ်စုဝင် Artist များစုပေါင်းကာ Snow Set, Oxygen (O2) ကဲ့သို့သောအုပ်စုပွဲများအပြင် Four Wheels,………., …………ကဲ့သို့သောအုပ်စုငယ်ပြပွဲများအဖြစ် Modern Painting, Installation, Performance စသည့် ခေတ်ပြိုင်အနုပညာများကို ၁၉၉၀ကျော်ကာလတစ်လျှောက်လုံး ခင်းကျင်းပြသခဲ့ကြပြီး ယနေ့တိုင်အောင်လည်း မတူညီသော နယ်ပယ်များတွင် ထင်ရှားသော Artist များလည်းဖြစ်ပါသည်။
မြန်မာနိုင်ငံရေးအပြောင်းအလဲကာလရှည် (၄)ခု(၁။ မြန်မာ့ဆိုရှယ်လစ်လမ်းစဉ်ပါတီခေတ်၊ ၂။ ၁၉၉၀ ရွေးကောက်ပွဲနှင့် န.၀.တ အစိုးရခေတ် (SLORC)၊ ၃။ နအဖအစိုးရနှင့် ၂၀၁၀ ရွေးကောက်ပွဲကာလ ၊၄။ နအဖအစိုးရအဖွဲ့လွန်ကာလ) ကိုဖြတ်သန်းလာခဲ့ပြီး ၂၀၁၂ ကြားဖြတ်ရွေးကောက်ပွဲကာလများအလွန် နိုင်ငံတကာအာရုံစူးစိုက်မှုနှင့်အတူ ဆက်ဆံရေးများကောင်းမွန်တိုးတက်လာချိန်၊ ကမ္ဘာနှင့် နိုင်ငံရေးဆက်ဆံမှုများ အရှိန်အဟုန်မြင့်မားလာသော ယခုလိုအချိန်အတွင်း အမြင်သစ်၊ အတွေးသစ်၊ အနုပညာလက်ရာပစ္စည်းအသစ်များကို အရှိန်အဟုတ်ဖြင့်ဖော်ထုတ်ပြသနိုင်ရန် ရည်ရွယ်ပြီး Commerical Organization အနေဖြင့်မဟုတ်ဘဲ Collaborative art event နှင့် Remarkable ပြပွဲများအသွင်ဖြင့် Modern, Very Modern, Post Modern to New & Contemporary Art အမျိုးအစားများကို မျိုးဆက်များအနေဖြင့် အနုပညာဆိုင်ရာ စုစည်းလုပ်ဆောင်မှုများပြုလုပ်ရန် ကောင်းဆု၊ ငြိမ်းချမ်းဆု၊ မင်းဇော်၊ ဟိန်းသစ်၊ ဗဂျီလင်းဝPÖ၊ နေအောင်ရှု၊ ကျော်ဆန်းသွင် တို့ဖြင့် EAo 90s များအဖြစ် ဖွဲ့စည်းလိုက်ပါသည်။